Usoro ọrụ - Ndị na-ege ntị na Ntanetị Okwu nke Ozi AudienceGain Ltd
Nzube na oke nke nchịkọta ozi
Ozi nke ndị otu ahụ, nke anyị nwere ike iji maka ebumnuche ziri ezi ndị a:
- Ejiri iji kwado iwu mgbe ndị ahịa nwere mkpa ịzụta ngwaahịa ọ bụla na weebụsaịtị
- Ejiri ya na izipu ozi, itinye usoro mgbasa ozi na mmemme PR maka ọrụ ndị eji ọhụụ na weebụsaịtị
+ Nye email banyere ozi ahụ site na email,
+ Ejiri iji nyochaa usoro ndị ahịa, maka ebumnuche maka iwulite ọrụ ọhụụ, ma ọ bụ meziwanye ndị ochie.
+ Ejiri kpọtụrụ ndị otu mgbe anyị nyochara ozi ndị ahịa, hazie nkwalite, gbanwee ozi na nyocha, nkọwa.
+ Ejiri iji zaa ajụjụ ndị ahịa: Anyị ga-aza ndị otu site na email, ekwentị, ma ọ bụ email na adreesị ndị otu, mgbe ndị otu jụrụ ajụjụ.
Akụkụ nke iji ozi
Anyị raara onwe anyị nye naanị iji ozi dị n'ime ya maka ebumnuche ya.
Oge nchekwa ozi
Anyị ga-echekwa Ozi Nkeonwe nke Onye Ahịa nyere na sistemụ anyị n'ime oge anyị na-enye ndị Ahịa ọrụ ma ọ bụ ruo mgbe ebumnuche nke nchịkọta ahụ ma ọ bụ na arịrịọ ndị ahịa ahụ. arịrịọ ka ibibi ozi enyere.
Adreesị nke ngalaba na-anakọta ma jikwaa ozi nkeonwe
AudienceGain Company Limited dị na Nr. 19 Nguyen Trai, Khuong Trung Ward, Obodo Thanh Xuan, Hanoi City, Vietnam.
Nkwekorita iji chebe ozi nkeonwe nke ndị ahịa
Ozi ndị ahịa na-etinye aka na nzuzo zuru oke n'okpuru iwu nchedo ozi nkeonwe. Nchịkọta na ojiji nke ozi nke ndị ahịa ọ bụla nwere ike ime naanị nkwenye nke onye ahịa ahụ, belụsọ mgbe achọrọ ya ịnye ya mgbe ndị ọchịchị rịọrọ ya. okwu ma ọ bụ gosipụta nke ọ bụla nke atọ gbasara ozi nkeonwe nke ndị otu na-enweghị nkwenye nke onye otu ahụ.
Ọ bụrụ na ndị hacker wakporo ihe nkesa ihe ọmụma ahụ na-akpata ọnwụ nke data nke onye otu ahụ, onye na-ahụ maka weebụsaịtị ga-ahụ maka ịgwa ndị ọrụ nyocha okwu ahụ ma mee ya ngwa ngwa. mee ka ndi otu mara.
Ọ bụrụ na ndị ahịa achọpụta na emebiri ozi nkeonwe ma ọ bụ mebie ya, ndị ahịa nwere ike itinye akwụkwọ mkpesa site na ọwa nlekọta ndị ahịa anyị, mgbe ha natara mkpesa nke obodo ahụ. Anyị ga-eme ihe niile dị mkpa iji gbochie ụdịrị ozi nkeonwe dị na ya, ma were usoro nkwado iji kpuchido ikike na ọdịmma ziri ezi nke ndị ahịa. nwere ikike izipu mkpesa gbasara ngosi nke ozi nkeonwe na ndị ọzọ na onye nchịkwa nke weebụsaịtị. Mgbe ị na-anabata azịza ndị a, anyị ga-ekwenye na ozi ahụ, ga-abụrịrị ọrụ maka ịzaghachi ihe kpatara ya ma duzie ndị otu iji weghachite ma chekwaa ozi ahụ.
Iji Ọrụ anyị
Must ga-asọpụrụ iwu niile enyere gị n'ime Ọrụ ahụ.
Enweghị ikike ikike nke Ọrụ anyị. Dịka ọmụmaatụ, etinyela aka na Ọrụ anyị ma ọ bụ nwaa ịnweta ha n'ụzọ ọ bụla karịa site na ihu na ntuziaka anyị na-enye. Nwere ike iji Ọrụ anyị naanị dị ka iwu kwadoro, gụnyere iwu na usoro iwu mbupụ na mbupụ ọpụpụ. Anyị nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị ịnye gị Ọrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nweghị ịgbaso usoro ma ọ bụ atumatu anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị na-enyocha omume adịghị enyo enyo.
Ojiji nke Ọrụ anyị apụtaghị na ị nwere ikike ikike ọgụgụ isi ọ bụla na Ọrụ anyị ma ọ bụ ọdịnaya ị nweta. Nweghị ike iji ọdịnaya sitere na Ọrụ anyị belụsọ na onye nwe gị nyere gị ikike ma ọ bụ iwu nyere gị ikike. Usoro ndị a anaghị enye gị ikike iji ụghalaahịa ọ bụla ma ọ bụ akara logos eji arụ ọrụ anyị. Ewepụla, kpuchie, ma ọ bụ gbanwee ọkwa iwu ọ bụla gosipụtara na ma ọ bụ na njikọ nke Ọrụ anyị.
Nzuzo na ikike nwebisiinka
Iwu nzuzo nke AudienceGain na-akọwa otu anyị si emeso data nkeonwe gị ma chebe nzuzo gị mgbe ị na-eji Ọrụ anyị. Site na iji Ọrụ anyị, ị na-ekwenye na AudienceGain nwere ike iji ụdị data ahụ dabere na iwu nzuzo anyị.
Anyị na-azaghachi akụkọ gbasara mmebi iwu nwebisiinka ma kwụsịkwa akụkọ ndị omempụ ọzọ dabere na usoro edepụtara na Vietnam's Millennium Copyright Act.
Anyị na-enye ozi iji nyere ndị nwe nwebiisinka aka ijikwa ihe ọgụgụ isi ha n'ịntanetị. Ọ bụrụ n ’ị chere na mmadụ na-emebi ikike nwebiisinka gị wee chọọ ịgwa anyị, ị ga - achọta ozi ga - esi nyefee ọkwa na iwu ndị na - ege ntị maka ịzaghachi ọkwa na Helplọ Ọrụ Enyemaka anyị. anyị.
Mgbanwe na Nchupu nke Ọrụ Anyị
Anyị na-agbanwe mgbe niile ma na-emeziwanye Ọrụ anyị. Anyị nwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ wepu ọrụ ma ọ bụ atụmatụ, anyị nwere ike kwụsịtụ ma ọ bụ kwụsị Ọrụ kpamkpam.
Can nwere ike ịkwụsị iji Ọrụ anyị n'oge ọ bụla, agbanyeghị na anyị ga-akwa ụta maka ị kwụsị iji Ọrụ anyị. Ndị na-ege ntị na-ege ntị nwekwara ike ịkwụsị ịnye gị Ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ tinye ma ọ bụ mepụta oke ọhụụ na Ọrụ anyị n'oge ọ bụla.
Anyị kwenyere na ị nwere data gị, yana ọ dị mkpa iji kpuchido ohere gị na ya. Ọ bụrụ na anyị kwụsị Ọrụ, mgbe enwere ike ma nwee ezi uche, anyị ga-enye gị ọkwa ọhụụ na ohere iji wepu ozi na Ọrụ ahụ.
Iwu na ụdị nke ịkwụ ụgwọ
Maka nkwekọrịta AudienceGain anyị ga-ewere 50% nke uru nkwekọrịta tupu oge eruo iji kwụọ ụgwọ mmejuputa oru ngo. Mgbe emechara ọrụ ahụ, anyị ga-ewere 50% fọdụrụnụ nke ego nke ndị ahịa dị ka akọwapụtara na nkwekọrịta ahụ.
Ego niile sitere na AudienceGain nwere nnata zuru oke nke na-eme ntụkwasị obi na ndị ahịa.
Maka ọrụ ndị ọzọ na mpụga nkwekọrịta a, anyị ga-atụle gị ma kwụọ ụgwọ naanị oge 1 mgbe emechara ọrụ ahụ.
Akwụkwọ ikike / mmezi iwu
Ngwaahịa niile nke ụlọ ọrụ ndị na-ege ntị na-akwụ ụgwọ maka ọnwa 12 site na ụbọchị ọrụ inyefe ọrụ. Naanị anyị na-ekwe nkwa ikpe nke njehie na-esite n'akụkụ anyị dị ka njehie koodu, njehie na-enweghị njikọ anyị ga-enye ndị ahịa azịza.
Banyere ọrụ imepụta weebụ anyị na-enye ndị ahịa 1 afọ nke nnabata n'efu, yabụ n'oge afọ mbụ nke ojiji, ọ bụrụ na enwere nsogbu metụtara ọrụ nnabata anyị nyere, anyị ga-edozi ya. maka gị. Mgbe otu afọ gwụchara, ọ bụrụ na ịchọghị iji ọrụ nnabata anyị, anyị anaghị ahụta maka mmejọ ọ bụla metụtara ọrụ nnabata ndị ọzọ.
Oge ikike bụ oge 24 dị na nke kachasị ọhụrụ mgbe ịnata ozi n'aka gị, ewepu ezumike. Ozi niile anyị kpọtụrụ site na email, ma ọ bụ ngwaọrụ nkata n'ịntanetị.